Soo dejisan GPS Utility 5.36 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: GPS Utility
GPS Utility – software ah si ay u maareeyaan iyo habka GPS warbixin. Software ka kooban qalab ay u saxaa, nooca, aad nuqulka ama data GPS filter. GPS Utility taageertaa badan oo qaabab file, oo awood in ay is dhaafsadaan xogta la codsiyada iyo qalab kale. Software The kuu ogolaanayaa inaad go’aan ka waddo ama dura dhexeeya dhibcood, la abuuro marto raadinta iyo soo bandhigaan booska hadda khariiradda. GPS Utility gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar iyo waxa ay leedahay fududahay in la isticmaalo interface.
Maamulka iyo ka arrinsashada macluumaad GPS
Taageerada badan oo qaabab file
Ogaanshaha Automatic ah ee wadada
Dhexgalka codsiyada iyo aaladaha kale ee
Soo dejisan GPS Utility
Faallo ku saabsan GPS Utility
GPS Utility Xirfadaha la xiriira